Iindaba -Izinto ezininzi ezinqanda ukuthotyelwa kwemveliso yamachiza alahlekileyo e China
Zininzi izinto ezithintela ukukhula kwemizi-mveliso yamachiza alahlekileyo e-China
Okwangoku, isithsaba esitsha sesifo somoya esinepneumonia sinempembelelo enkulu kulungelelwaniso lwezoqoqosho kwihlabathi kunye nemisebenzi yezoqoqosho, utshintsho olunzulu kwi-geopolitics, kunye noxinzelelo olwandayo kukhuseleko lwamandla. Ukuphuhliswa kweshishini lamachiza lale mihla kwilizwe lam kubaluleke kakhulu kwisicwangciso.
Kutshanje, uXie Kechang, usekela-dean we-Chinese Academy of Engineering kunye nomlawuli weLebhu yeLabhoratri yeNzululwazi yamalahle kunye neTekhnoloji yoMphathiswa Wezemfundo kwiYunivesithi yaseTaiyuan yeTekhnoloji, ubhale inqaku lokuba ishishini lamachiza lale mihla, njengenxalenye ebalulekileyo Inkqubo yamandla, kufuneka "ikhuthaze ukuveliswa kwamandla kunye nohlaziyo lokusetyenziswa kunye nokwakha ikhabhoni ecocekileyo, inkqubo ekhuselekileyo nenamandla" sisikhokelo ngokubanzi, kunye neemfuno ezisisiseko "zicocekile, zinekhabhoni encinci, ikhuselekile kwaye isebenza ngokufanelekileyo" zezona mfuno zisisiseko yokuphuhliswa kweshishini lamachiza lale mihla ngelixesha le- "14th Isicwangciso seminyaka emihlanu". Iinjongo "ezintandathu zokuqinisekisa" zifuna ukuba isiqinisekiso senkqubo yamandla esomeleleyo sokubuyiselwa kwemveliso kunye nocwangco lokuphila kunye nokubuyiselwa koqoqosho lwase China.
Ukuma ngobuchule kushishino lweekhemikhali zamalahle kwilizwe lam khange kucace
UXie Kechang wazisa ukuba emva kweminyaka yophuhliso, icandelo lamashishini amachiza amanje eli lizwe enze inkqubela phambili enkulu. Okokuqala, isikali ngokubanzi siphambili kwihlabathi, okwesibini, inqanaba lokusebenza komboniso okanye izibonelelo zemveliso ziye zaphuculwa ngokuqhubekekayo, kwaye okwesithathu, icandelo elibonakalayo letekhnoloji likumgangatho ophambili wamazwe aphesheya okanye okhokelayo. Nangona kunjalo, kusekho izinto ezithile ezithintelayo kuphuhliso lweshishini lamachiza lale mihla kwilizwe lam.
Ukuma ngobuchule kophuhliso lwamashishini akucaci. Amalahle yeyona nto iphambili ekwenziweni kwamandla e-China. Uluntu alunalwazi ngemveliso yamachiza alahlekileyo yangoku kunye noshishino oluhlaza oluphezulu lweekhemikhali olunokuthi lucoceke kwaye lusebenze, kwaye ngokuyinxalenye lithathe indawo yecandelo le-petrochemical, emva koko "de-coalization" kunye ne "smelling chemical discoloration", nto leyo eyenza ishishini lamachiza lase China ibekwe ngobuchule Akukacaci kwaye kucacile, oku kukhokelele kutshintsho lomgaqo-nkqubo kunye nemvakalelo yokuba amashishini akhwele "ngokurhabaxa".
Ukusilela kwangaphakathi kuchaphazela inqanaba lokhuphiswano kumashishini. Umzi mveliso wamachiza amalahle ngokwawo unokusetyenziswa kwamandla asezantsi kunye nokusebenza ngokuguqulwa kobutyebi, kunye neengxaki zokhuselo lokusingqongileyo ezibangelwe “yinkunkuma ezintathu”, ngakumbi amanzi amdaka amachiza amachiza, abalulekileyo; ngenxa yohlengahlengiso olubalulekileyo lwe-hydrogen (uguquko) kwitekhnoloji yale mihla yamachiza amachiza, ukusetyenziswa kwamanzi kunye nokukhutshwa kwekhabhoni kuphezulu; Ngenxa yenani elikhulu leemveliso zaseprayimari, ukukhula okungonelanga kweemveliso ezisulungekileyo, ezahluliweyo, kunye nezinto ezikhethekileyo ezihamba ezantsi, ithuba lokuthelekisa eli shishini alicacanga, kwaye ukhuphiswano alunamandla; ngenxa yesithuba sokudityaniswa kwetekhnoloji kunye nolawulo lwemveliso, iindleko zemveliso ziphezulu, kwaye ukusebenza ngokukuko kuhlala kufanele ukuba kuphuculwe njl.
Indawo engaphandle ithintela uphuhliso lwamashishini. Ixabiso lePetroleum kunye nonikezelo, amandla emveliso kunye nentengiso, ulwabiwo lwezixhobo kunye nerhafu, ukuxhaswa kwemali mboleko kunye nembuyekezo, amandla okusingqongileyo kunye nokusetyenziswa kwamanzi, igesi yendlu eluhlaza kunye nokuncitshiswa kokungcola zizinto zonke zangaphandle ezichaphazela ukukhula kwelizwe lamashishini amachiza amachiza. Izinto ezizodwa okanye ezixineneyo kumaxesha athile nakwimimandla ethile ayithinteli kakhulu kuphuhliso olusempilweni lwamashishini amachiza amachiza, kodwa inciphise kakhulu amandla oqoqosho oluchasene nomngcipheko wamashishini abunjiweyo.
Kufuneka uphucule ukusebenza kakuhle kwezoqoqosho kunye namandla okulwa nomngcipheko
Ukhuseleko lwamandla ngumcimbi opheleleyo kunye nesicwangciso esihambelana nophuhliso lwase China kunye nentlalo. Ukujongana nobume bendalo kunye nophuhliso lwamazwe aphesheya, ukuphuculwa kwamandla acocekileyo eTshayina kufuna ukuba kuphuculwe ubuchwephesha bokususa ukungcola okuphezulu, ubuchwephesha bokulawula ukungcola okuninzi kunye nonyango lwamanzi amdaka. Itekhnoloji yokukhupha zero kunye netekhnoloji yokusetyenziswa kwezixhobo "ezintathu, ukuxhomekeka kwiiprojekthi zokubonisa ukufezekisa umzi mveliso ngokukhawuleza, kwaye kwangaxeshanye, ngokusekwe kubume bommandla womoya, ubume bamanzi kunye nobume bendawo yomhlaba, ngokwesayensi ukuhambisa amalahle ishishini lamachiza amandla. Kwelinye icala, kubalulekile ukuseka nokuphucula amandla asekwe ngamalahle kunye nemilinganiselo yemveliso ecocekileyo yemichiza kunye nemigaqo-nkqubo enxulumene nokhuselo lokusingqongileyo, ukuphucula inkqubo yolawulo lwemveliso ecocekileyo yokuvunywa kweprojekthi, ukujonga ngokupheleleyo inkqubo kunye nokuvavanywa kwasemva kovavanyo, ukucacisa uxanduva lokujonga, ukwenza inkqubo yokuphendula, nokukhokela nokulawula amandla asekwe kumalahle Uphuhliso olucocekileyo loshishino lwemichiza.
U-Xie Kechang ucebise ukuba ngokubhekisele kuphuhliso lwekhabhoni esezantsi, kufuneka ucacise ukuba yeyiphi imveliso yamachiza esekwe kumalahle enokuthi ayenze ekunciphiseni ikhabhoni. Kwelinye icala, kubalulekile ukusebenzisa ngokupheleleyo izibonelelo ze-high-concentration CO ngemveliso kwinkqubo yamachiza esekwe kumashishini amachiza kwaye ujonge itekhnoloji yeCCUS. Ukuhanjiswa okuphambili kweCCS esebenza kakuhle kunye nophando olunzulu kunye nophuhliso lweetekhnoloji zeCCUS ezinje ngezikhukula ze-CO kunye ne-CO-to-olefins ukwandisa ukusetyenziswa kwezixhobo ze-CO; kwelinye icala, akunakwenzeka ukuba "uphonsa kwimouse" kwaye ungazihoyi iinkqubo zenkqubo yamandla amashishini amachiza asekwe kumalahle aphezulu, kwaye athintele Uphuhliso lwenzululwazi loshishino lwamachiza olusekwe kumalahle kufuna ubuchwephesha bokuphazamisa. ngokusebenzisa ibhotile yokunciphisa ukukhutshwa kumthombo kunye nokugcina amandla kunye nokuphuculwa kokusebenza, kunye nokwenza buthathaka ubunjani obuphezulu bekhabhoni kushishino lwekhemikhali olusekwe kumalahle.
Ngokuphathelene nophuhliso olukhuselekileyo, urhulumente kufuneka acacise ukubaluleka kwesicwangciso-qhinga kunye nokubeka indawo kwimizi-mveliso yamandla amandla amalahle njengelitye "lokulinganisa" kukhuseleko lwamandla elizwe lam, kwaye ngokunyanisekileyo athathe uphuhliso olucocekileyo nolusebenzayo kunye nokusetyenziswa kwamalahle njengendawo Umsebenzi ophambili wotshintsho lwamandla kunye nophuhliso. Kwangelo xesha, kubalulekile ukukhokelela ekuqulunqweni kwemigaqo-nkqubo yamandla esekwe kumalahle kunye nakwimigaqo-nkqubo yocwangciso lweekhemikhali, ukukhokela ukuphazamiseka kwetekhnoloji okuphazamisayo, kunye nokukhuthaza ngocwangco ukukhuthaza amandla amashishini amashishini amashishini amachiza ukufezekisa ngokuthe ngcembe umboniso, urhwebo olulinganiselweyo kunye noshishino olupheleleyo; qulunqa isiqinisekiso esifanelekileyo semigaqo-nkqubo yezoqoqosho neyezezimali ukuphucula Ukuphumeza uqoqosho kunye nokhuphiswano lwamashishini, ukwenza isikali esithile samandla okutshintsha amandla e-oyile kunye negesi, kunye nokudala imeko-bume elungileyo yangaphandle yokuphuhliswa kwemizi-mveliso yamachiza amalahle anamhlanje.
Ngokuphathelene nokusebenza okuphezulu kokusebenza kakuhle, kuyafuneka ukuba kwenziwe uphando kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso kwitekhnoloji yamandla amandla amalahle esekwe kumbane njengokudityaniswa ngokuthe ngqo kwee-olefins / i-aromatics, i-pyrolysis yamalahle kunye nokudityaniswa kwegesi, kunye nokuqonda impumelelo yamandla ukonga nokunciphisa ukusetyenziswa; ngamandla ukukhuthaza ishishini leekhemikhali lamandla asekwe ngamalahle kunye nophuhliso olumanyanisiweyo lwamandla kunye namanye amashishini, ukwandisa ikhonkco lezemveliso, ukuvelisa iziphelo eziphezulu, uphawu, kunye nexabiso eliphezulu, kunye nokuphucula ukusebenza kwezoqoqosho, ukumelana nomngcipheko kunye nokhuphiswano; Ukwandisa ulawulo lwamandla okonga umbane, kugxilwe ekukhuthazeni uthotho lweetekhnoloji zokonga umbane ezinje ngeqondo eliphantsi lobuchwephesha bokusetyenziswa kwamandla ombane, ukonga amalahle kunye neetekhnoloji zokonga amanzi, ukwandisa inkqubo yeetekhnoloji, kunye nokuphucula ukusetyenziswa kwamandla kwezixhobo. (UMeng Fanjun)
Ukukhutshelwa: Iindaba zeShishini lase China
Ixesha Post: Jul-21-2020